Utu Pi 400: kọmputa zuru ezu na keyboard | Akụrụngwa n'efu
Rasberi Pi 400: kọmputa zuru ezu na keyboard
Ọ bụrụ n’icheta ụfọdụ komputa akụkọ ifo ọtụtụ iri afọ gara aga, igwe ndị a toro eto bụ isi ihe eji arụ ọrụ n’ime kọmputa niile. Na ihe ọhụrụ Pi 400 Ọ gbakee na Devid agụghị ndị gbara kachasi mkpa, ma na niile ọhụrụ ọganihu nke ugbu a technology.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ndị ochie dịka Apple mbụ, BBC Micro, ZX ụdịdị dị iche iche, Commodore, wdg, ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ otu usoro ahụ. Naanị ị ga-ama ihe ihe banyere igodo a puru iche ya mere, a na m akpọku gị ka ị gaa n’agụ maka oke ihe ịtụnanya a nke ga-abụ nke gị maka ezigbo ọnụ ahịa ...
1 Kedu ihe bụ Pi Pi Pi?
Kedu ihe bụ Pi Pi Pi?
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị SBC a, ị ga-eme Mara Rasberi Pi 400. Otu n'ime ntọala kachasị arụ ọrụ ntọala a. Na ya ị nwere ike ịnwe kọmpụta zuru ezu na ị ga-ejikọrịrị na ihuenyo ka ịnweta akụrụngwa zuru ezu iji malite ịnụ ụtọ sistemụ arụmọrụ niile dị.
Pipo Pi 400 nwere ihu ọma kọmpat keyboard nke nwere ngwaike zoro ezo n'okpuru igodo isi. Na mgbakwunye, n’otu akụkụ ya ị ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri niile na oghere dị iji jikọta akụkụ niile, kaadị ebe nchekwa, wdg.
Este Ọkpụkpọ kit ọhụrụ bara ezigbo uru, ebe ọ na-agbakwunye ọrụ ndị ọzọ na bọọdụ Rasbperry Pi na ọ bụrụ na ịzụta ya n'ụdị usoro ị ga - enweta PCB, mana ị ga - azụta okwu dị iche iji kpuchido ya, keyboard, mouse, wdg Na nke a ọ dịghị otu a, ị nweela ahụigodo na ikpe ahụ, yana SBC, niile na otu ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe nke a Pipe Pi 400 na-edobe, nke bụ eziokwu bụ na njikwa teknụzụ ha dị ezigbo mma. Ọ bụ eziokwu na ị gaghị enweta ngwaike dị ike dịka na Modul Compute, ma ọ bụ jiri ya nsụgharị kachasị ike nke Rasberi Pi 4, ma ọ bụ ezughị ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ na ọrụ.
Na usoro nke nkọwa na ị na-eche, ha bụ:
Mmebe: Ụkpụrụ Mgbakwunye Raspberry
SoC: Broadcom ARM 1.8Ghz quad isi. Ọ gụnyere GPU zuru ezu maka vidiyo 4K na 60FPS.
Ebe nchekwa RAMEbe nchekwa: 4GB DDR.
Njikọta na ọdụ ụgbọ mmiri: WiFi 5, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 na USB-C maka ịgba ụgwọ, oghere microSD, microHDMI, na GPIO nkịtị.
ahụigodo- Gụnyere kọmpat keyboard reminiscent nke Apple Magic kiiboodu imewe.
Mkponyeaka: gunyere ntuziaka mmalite, oke ọrụ gọọmentị gụnyere na kit, HDMI-microHDMI nkwụnye, nkwụnye ike, yana microSD kaadị na Raspberry Pi OS.
Ozi ndị ọzọ - Utu Pi 400
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Rasberi Pi 400: kọmputa zuru ezu na keyboard
Iwu Ohm: ihe niile ị chọrọ ịma
MaaxBoard Mini: nnukwu ihe ọzọ maka Rasberi Pi 4